Chii chinonzi kutora bhidhi? | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi kutora bhidhi?
Sechikamu chakanaka chevashambadzi vanoziva, iyo yekutora bhidha ndicho chirevo chekuti chii chaizvo chinotora. Kutora bhidha. Icho chiitiko chakaomarara icho munhu mumwe kana vamwe vanhu kana makambani vanopa kune vese vagovana vekambani yakanyorwa kutenga masheya avo, kana zvimwe zvekuchengetedza zvinovatendera kuti zviwanikwe, mukutsinhana nemutengo wakatemwa kare. Iko kufamba kunoenderera nehumwe huwandu pakati pemakambani akanyorwa pamisika yemari. Mune zvimwe zviitiko, uchifarira zvaunofarira, asi kune vamwe zvakapesana, kusvika padanho rekugadzira zvakakomba matambudziko ekudyara.
Yekutora bhidha inogara iri kufamba iwe yaunofanirwa kufunga nezvayo muzviito zvako mumisika yemasheya. Iyo yakakosha, nekuti inokanganisa mari yako kana iyo kambani kwawakavhura zvigaro iri munhu akabatwa nesangano iri. Iko kwausingakwanise kukanganwa kuti ichinhu chinoshamisa chinogona kubatsira masheya anokwira kumusoro kana pasi zvinoenderana nehunhu hwebhendi rekutora. Hazvishamisi kuti izvi zvinopihwa hazvina kumbobvira zvagadziriswa pasi pemamiriro akafanana, kunyangwe zvese zvikaita senge zvakafanana.
Ehezve, kana iyo kambani iwe yauri vagovani vanotambura nekutora bhidha, iwe uchafanirwa kuita mamwe maakaunzi sezvo achizokanganisa iro bhuku kukosha kwekudyara kwako. Kusvikira makore mashoma apfuura, pakanga paine chimiro chevashambadziri vadiki nepakati avo vakazvipira kukwezva makambani akanyorwa erudzi urwu nechinangwa che shandisa zvakanyanyisa kusevha kwako uye chii chakanyanya kukosha munzvimbo pfupi kwazvo yenguva. Pamusoro pehumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakakosha maonero. Nekuti bhodhi yekutora yakakosha kwazvo kune hombe nhamba yevarimi, sezvo iwe uchizokwanisa kuongorora kubva zvino zvichienda mberi.
1 Tender Chipo: Makirasi Ezvipo
2 Chinjana kuburikidza nemasheya
3 Ndeipi iyo inosarudzika-kutora bhidha?
4 OPAS iwe yaunofunga seane hushamwari
5 Matipi ekutengesa neOPAS
Tender Chipo: Makirasi Ezvipo
Usati waenda kune zvinoshanda pane izvo zvinomirira kutora bhidha, hauzove nesarudzo kunze kwekuziva kuti mafambisirwo emakambani aya haana kufanana, sevatengi vazhinji vanotenda kubva pakutanga. Ehezve haisi nzira iyi, asi kune nzira dzakasiyana dzekunzwisisa kuti chii chinotora bhidha. Nekuti zvirizvo, pane mune yekutanga nzvimbo inonzi inomiririra OPAS. Mune ino chaiyo kesi, ivo vanoreva kumakambani ayo anounza kutenga kupihwa kwe100% yezvikamu yekambani pamutengo wakaenzana uye izvo zvinogona kutotadza kuteerera kune chero mamiriro.
Kune rimwe divi, kune chekuzvidira kupa kweveruzhinji kwekutora uye izvo zvinozivikanwa zvakanyanya nekuti haisi pasi pemitemo yemitemo kana zvasvika pamutengo wezvikamu zvako. Nekudaro, iyi mhando yekutora bhidha haina kufanana neyakajairika mune yakaoma chikamu cheiyo bhegi. Kana zvisiri, pane zvinopesana, zvakabatana kune rimwe kirasi remakambani asina kana kana zvishoma zvine chekuita nemitengo pamisika yakatarwa. Zviri nyore kuti iwe utarise nezve ichi chakakosha chinhu kuti unzwisise zvakakwana izvo zvinongoreva musangano uyu wekambani. Beyond kumwe kuverenga uye bhizinesi kufunga.
Chinjana kuburikidza nemasheya
Izvo zvakakosha kuti iwe uzive mupfungwa kuti chero yekutora bhidha inogona kuitika nemari. Kunyangwe, hongu, chinhu chinowanzoitika ndechekuchinjana kwemasheya kana kutora chikamu, sezvazvinoitika kumakambani anosanganisirwa mumakesi emasheya indices yehuwandu hwemabhizimusi. Kusvika padanho iwe iwe pachako raunogona kutora chikamu mune ino bhizinesi maitiro. Ndokunge, kutenga imwe kana akawanda masheya mumakambani aunogona kuzoita purofiti kana mutengo wekushanduka uchifarira zvido zvako semudyari mudiki nepakati nepakati.
Kubva pane ino mamiriro, chokwadi pamusoro pemutengo uyo iwe waunogona kuwana izvi zvikamu zvemakambani akanyorwa zvinonyanya kukosha. Sezvo iri iyo ichaona pakupedzisira mukubatsira kwekushanda inoitwa kuburikidza nekufamba kweaya akasarudzika maitiro. Mune zvimwe zviitiko, inogona kuve inonakidza kune zvaunofarira uye kune vamwe kwete zvakanyanya. Kana chii chakanyanya kushata, ive oparesheni inotyisa mauri iwe yaunogona kusiya yakawanda mairi munzira. Sezvo zvirokwazvo zvichave zvakaitika kwauri pane kanopfuura kamwe chiitiko. Mupfungwa iyi, usakanganwa kuti bhodhi yekutora inogona kuve pfumo rinocheka nekwose, riine zvinopesana zvachose pazvinangwa zvaro.
Ndeipi iyo inosarudzika-kutora bhidha?
Kune chimwezve chimiro mukati meiyi kambani yemabhizimusi uye bhizinesi ine kukosha kwakakosha pakati pevashoma nevapakati varimari, senge kubviswa kwekutora bhidhi. Asi izvi zvakasarudzika zvekutora bhidhi zvine chii? Huye, izvo chaizvo zvinosanganisira kutengesa zvikamu pamberi pekambani rega kutengesa pamusika wemasheya. Nekudaro, nhoroondo iyi kirasi yemabasa emasheya haiwanzo kugutsa kwazvo kudzivirira zvaunofarira. Kana zvisina kudaro, pane zvinopesana, asi zvinopesana zvinowanzoitika uye hazvikubatsire iwe zvachose kuwana mari inowanikwa mukushanda kweaya maitiro.
Kune rimwe divi, izvo zvinonzi kufungidzirwa kutora kutora bhizimusi kunogona kukuisa iwe mukubatwa mune chengetedzo zvakare nyore, sezvakaitika mumakore achangopfuura. Kunyangwe, sekukudziridza kwayakaitwa mune dzimwe tsika dzeSpanish stock stock, nemitengo yekutanga kure kwazvo neiya yakagadziriswa mukutenga. Nenzira iyi, iko kuvhiya kunosiya iwe usina kugutsikana, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti unenge usina simba mukutarisana nekufamba kweaya maitiro. Hazvishamisi kuti pane zvishoma zvishoma zvaunogona kuita kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Mupfungwa iyi, hauzove nesarudzo kunze kwekutora chokwadi chitsva icho misika yezvemari inozoona kubva panguva iyoyo zvichienda mberi.
OPAS iwe yaunofunga seane hushamwari
Ehe, hapana imwe chete yemhando yekutora bhidha, asi akati wandei uye kuti iwe unozogona kushandisa nzira yekudyara mune yega kesi. Imwe yeOPAS yaunogona kuwana ndeayo anonzi senge ane hushamwari uye ayo anoreva kana paine chibvumirano chaicho uye chakapfava pakati pekambani uye nevashandi. Mhedzisiro yainoburitsa pakati pevashoma nevapakati varimimari haisi yekutsamwa senge mune imwe OPAS. Kana zvisiri, pane kudaro, ine chinhu chakasimba chisina kwazvakarerekera, icho chingangokubatsira kana kukuvadza iwe.
Ehezve, iyo yeruzhinji kutora kupihwa kweanopesana hunhu vane hasha OPAS uye kuti ndivo vangangove vanozivikanwa kwazvo munyika uye kunyangwe epasi rose musika wemusika wemasheya. Nemhedzisiro isingafungidzike pane zvinogona kuitika kune ako ekudyara. Nekuti iko kuita kwakasiyana kwazvo zvichienderana nemamiriro matsva akaisirwa nevatsva vanogovera. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti rudzi urwu rwemakambani mafambiro zvirokwazvo anowanzoitika mumisika yemari. Kunyangwe mukati memakambani makuru anoita anonyanya kukosha masheya epasi rose.
Matipi ekutengesa neOPAS
Kubva pane ino mamiriro, iyo yekutora bhidha inogara iri chiratidzo chekuti chimwe chinhu chiri kuitika mune yakanyorwa kambani uye mitengo iyo iyo mashandiro anowanzovharwa zviri pachena zvisingatarisirwe, sezvo kune rimwe divi iwe unogona kufungidzira kubva pane yako nzira seye mudiki nepakati investor. . Chero zvazvingaitika, iyo National Securities Market Commission inokupa yakateedzana yemaitiro ehungwaru kutarisana nemafambisirwo emakambani aya. Kufanana neinotevera iyo yatinokufumura pazasi:
Kuenda kune OPA kunogara kuri kwekuzvidira. Iwe semuzvinabhizimusi uchave iwe unofunga kuti wotengesa zvikamu zvako here kana kuti kwete. Ichokwadi chekusaenda kunotora bhidha hachirevi kurasikirwa kwezvikamu zvako.
Nguva dzose tarisa kubhurocha reOPA, zvisinei nezvinobuda munhau.
Kana iwe semuzvinabhizimusi ukasarudza kuenda kuOPA, unofanirwa kuzvitaura nekuburitsa gwaro rekugamuchirwa mubato iri pakaiswa zvikamu zvako.
Tarisa nekambani yako nzira dzakabvumirwa kutumira zvaunoraira.
Iyo yekugamuchirwa yekugamuchira nguva inogona kunge isingave iri pasi pegumi nemashanu mazuva ekarenda, kana kupfuura kupfuura makumi manomwe.
Iwe unogona kudzora iyo yekutambira hurongwa chero nguva isati yasvika zuva rekupedzisira renguva yekugashira yekugamuchira.
Muchiitiko chekuti paine zvinopfuura kamwechete zvekutora bhendi kukambani imwechete, vanogovana vanogona kuendesa zvirevo zvakawanda zvekugamuchirwa, zvichiratidza kurongeka kwezvavanoda uye zvataurwa kuti kuziviswa kunowanikwa kune vese vanokwikwidza.
Kumanikidzwa kutengesa kutenga (squezeze / kutengesa kunze). Zvinoitika muOPAS yakatangwa pa100% yezvikamu zvekambani kana nguva yekugashira yapera uye kuchine vagovani vasina kutengesa (hapana anopfuura 10%). Muzviitiko izvi, mupi angangoda kuti vagovani vacho vatengese zvavo zvikamu pamutengo weiyo nyoro yekupa. Kufunga izvo zvinoshandiswa pakutengesa uye kugadzirisa kweanopa. Kufanana nemugovani, ivo vangangoda kuti mupi atenge zvikamu zvavo pamutengo mumwe chete, uye mune iyi kesi mugovani anozotakura mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chii chinonzi kutora bhidhi?
Kubhadhara chikwereti, zvirinani kudzikisa chikwereti kana huwandu hwezvikamu?
Iwe ungadzivise sei mubhadharo pamakadhi ebhangi?